DOWNLOAD TOTAL AUDIO CONVERTER 5.2.0.158 MAKA N'EFU - MMEMME NYOCHA - 2019
Onu ogugu di omimi nke 5.2.0.158
Onu ogugu di omimi - ngwanrọ multifonctional maka igbanwe faịlụ faịlụ. Na-akwado ihe karịrị 30 formats, digitizes CD egwu, nbudata ma gbanwee ọdịyo site na njikọ YouTube, wepụ egwu egwu egwu si mp4.
Anyị na-akwado ịhụ: mmemme ndị ọzọ iji gbanwee usoro nke egwu
Nhọrọ 1: N'akụkụ aka ekpe nke usoro ihe omume ahụ, e nwere onye na-enyocha ebe a ị nwere ike ịhọrọ nchekwa nke nwere ihe egwu egwu, ihe omume ahụ ga-achọta data dị mkpa n'onwe ya.
Nhọrọ 2: dọrọ nchekwa ahụ na egwu n'ime window mmemme kachasị.
Dụgharịa ma gbanwee ntọghata
Ọ bụrụ na ị na-adọrọ ọwa n'otu ụzọ gaa na windo mmemme ahụ, a ga-enye gị ohere iji tọghata ha ozugbo mp3.
A na-ahọrọ usoro nke faịlụ mmepụta na n'elu panel. A na-agbanwe faịlụ na mp3, wav, wma, Ogg, mpc, aac, flac, ape, amr, opus, mp4.
Usoro ọ bụla nwere ike ime ka ntọala ndị ọzọ. Ị nwere ike ịgbanwe oge, àgwà, ọwa, gụnyere ọnụọgụ agbanwe (maka mp3). A na-eji ntọala ụfọdụ akọwapụta ụfọdụ ụdị. Dịka ọmụmaatụ, maka egwu, ị nwere ike ịhọrọ obere omimi nke 16 ma ọ bụ 8 bit.
Enwekwara ike ịhọrọ ebe ị ga-echekwa faịlụ ahụ, kọwaa ma ị ga-edezi mkpado mbụ, tinye faịlụ ahụ na ọbá akwụkwọ. iTunes.
Na-agbanwe akụkụ nke egwu ahụ
Ọrụ a na-enye gị ohere ịmegharị naanị akụkụ nke ihe ndị ahụ na usoro a họọrọ. A na-egosipụta ibe ahụ na ihe mmịfe, ma ọ bụ oge etiti achọrọ iji aka tinye.
Ige ntị ga-enyere gị aka idezi egwu ahụ kpọmkwem.
Onu ogugu ogugu di iche iche na-eme ka o kwe omume ijikota egwu a choputara n'otu faịlụ.
Wepụ ihe si mp4
Ọdịdị vidiyo mp4 na-emepe na onye nyocha ihe omume dị ka ihe egwu egwu ma ọ ga-ekwe omume iji tọghata ya na ụdị ọ bụla a na-akwado.
Usoro ihe omume ahụ nwere ike icetata CD egwu, ya bụ, wepụ egwu ma gbanwee na nchịkọta nhọrọ. Ntọala usoro ahụ bụ ụkpụrụ.
Tọghata faịlụ site na YouTube
Ịtụgharị faịlụ site na YouTube dị mfe: dị na pasị njikọ ahụ na vidiyo na ubi kwesịrị ekwesị ma gbanwee usoro. Usoro ihe omume ahụ ga-ebudata vidiyo ma mee ntụgharị.
Ọrụ ahụ na-egosiputa akụkọ banyere omume e mere na faịlụ. pdf, Ọpụ, HTML ma ọ bụ n'usoro ederede.
Enwere ike ichikota akwukwo ogugu di egwu site na njikwa, nke mere ka o kwe omume ikpo oku site na ngwa ndi ozo. Nchịkọta ndepụta nke iwu dị na menu. "Enyemaka".
Nyere na nkwado
Enyemaka na mmemme ahụ bụ naanị na Bekee.
Ị nwere ike ịkpọtụrụ onye ahịa site na email ma ọ bụ hapụ ozi na ibe nkwado nke saịtị ahụ.
Ọnụ ọgụgụ zuru ezu nke ihe omimi
1. Na-akwado ọtụtụ usoro.
2. Wepụ ihe site na vidiyo.
3. Digitize CD.
4. Na-agbanwe faịlụ site na YouTube.
Onu ogugu ihe omuma nke otutu
1. Ịdọrọ na dobe ntughari ga-ekwe omume na mp3.
Onu ogugu di omimi - Ezi onye ntụgharị nke nwere usoro ọrụ dị mkpa. Ọ bụrụ na diski egwu ochie na-ekpokọta ájá n'elu ala, mgbe ahụ ọ bụ oge ịnyefe ha na mp3.
Download mbipụta ikpe nke Total Audio Converter
Freemake Audio Ihe Ntụgharị EZ CD Audio Converter Esi gbanwee usoro nke egwu na mmemme EZ CD Audio Converter MediaHuman Audio Converter
Ọnụ ọgụgụ ntanetị ihe omume bụ ihe omume zuru ụwa ọnụ maka ịgbanwe faịlụ ọdịyo na CD digitizing na interface mara mma.
Onye Mmepụta: CoolUtils Development
Ọnụ: $ 32